Serivisy & sombin-javatra fanariana sombin-javatra very - Mpanamboatra sy mpamatsy fanodinam-bokatra any Sina - Casting Minghe
Inona no atao hoe Casting Foam Very
Fanariana sombin-javatra very (Fantatra koa amin'ny hoe Casting mafy) dia ny fampifangaroana ny savoka paraffin na modely vita amin'ny foam mitovy amin'ny habe sy ny endrik'ireo fanariana mba hamorona clusters. Aorian'ny fikosehana sy fanamainana ny rindrina marefo dia alevina ao anaty fasika quartz maina izy ireo ho an'ny maodely hovitrovitra. Izy io dia karazana fomba fanariana vaovao izay mahatonga ny maodely gasify, metaly mitazona ny toeran'ny maodely ary manamafy sy mihamangatsiaka mba hamoronana fomba fanariana vaovao.
Koa satria ny fasika maina tsy misy binder matetika dia nirodana nandritra ny fandrotsahana ka nandriaka i A. Wittemoser any Alemana dia nanjary ilay antsoina hoe "casting casting" tamin'ny taona 1967. Nahazo aingam-panahy tamin'io, ny fanariana foam-bolo very androany koa dia mampiasa banga hanamboarana ny fasika amin'ny toerana maro. Noho izany, ny haitao fanariana sombin-javatra very dia nivelatra haingana eran'izao tontolo izao tato anatin'ny 1971 taona.
Ny tombony amin'ny fanariana sombin-javatra very
1. Fametrahana mazava tsara
Ny famoahana sombin-javatra very dia dingana vaovao ary saika tsy misy marindrana na mamolavola marina. Ity dingana ity dia tsy mitaky ny hakana bobongolo, tsy misy fisarahana, tsy misy fasika, ka ny famafazana dia tsy misy tselatra, burr ary zoro volavola, ary mampihena ny fotony Ny lesoka haben'ny vokatry ny fitambarana. Ny fahamendrehan'ny casting dia mety hahatratra ny Ra3.2 ka hatramin'ny 12.5μm; ny refin'ny refin'ny refy dia mety hahatratra CT7 ka hatramin'ny 9; ny tambin-karaman'ny masinina dia hatramin'ny 1.5 ka hatramin'ny 2mm, izay afaka mampihena be ny vidin'ny milina. Raha ampitahaina amin'ny fomba fanariana fasika nentim-paharazana dia azo ahena 40% ka hatramin'ny 50% amin'ny ora milina.
2. Volavola malefaka
Manome fahalalahana ampy ho an'ny famolavolana firafitra fanariana izany. Ny casting tena sarotra dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fampifangaroana bobongolo plastika. Tsy mety amin'ny filatsahana vaventy fotsiny izany, na amin'ny fanaovana mekanika, fa na amin'ny maodely fizarazaran'ireo vokatra kely ihany koa.
3. Tsy misy fasika amin'ny famoahana nentim-paharazana
Noho izany, tsy hisy ny hatevin'ny rindrina tsy mitovy amin'ny fanariana ateraky ny haben'ny sandan'ny fotony na ny toerana tsy marina ao amin'ny fotony ambany amin'ny fanariana fasika nentim-paharazana.
4. Famokarana madio kokoa
Tsy misy binder simika ao anaty fasika mamolavola, plastika vita amin'ny foam dia tsy mampidi-doza amin'ny tontolo iainana amin'ny mari-pana ambany, ary ny tahan'ny fasika taloha dia 95% mahery.
5. Ahena ny vidin'ny fampiasam-bola sy ny famokarana
Ahenao ny lanjan'ilay banga fanariana, ary kely ny vola fanampiana amin'ny milina. Azo ampiasaina indray ny maodely milevina nalevina, miaraka amin'ny fako indostrialy, tsy misy burrs, ny fotoana fanadiovana dia azo ahena mihoatra ny 80%, ary mihena be ny vidiny.
Tsy afaka manipy vy fotsiny, vy metaly, fa mandefa vy koa miaraka amin'izay, koa ny famindrana dia malefaka ary be mpampiasa. Tsy mety amin'ny faritra kely sy salantsalany fotsiny izy io, fa ho an'ny casting lehibe ihany koa, toy ny fitaovan'ny milina, fantsona fantsom-by lehibe, faritra bobongolo mangatsiaka lehibe, kojakoja fitrandrahana harena ankibon'ny tany sns.
7. Tombony sy ferana
Ny fizotran'ny fanariana sombin-javatra very dia mitovy amin'ny fizotran'ny fanariana hafa, miaraka amin'ireo lesoka sy fetrany. Tsy ny casting rehetra no mety amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny sombin-javatra very, ka ilaina ny famakafakana manokana. Miorina indrindra amin'ireto zavatra manaraka ireto handinihana raha hampiasa an'ity dingana ity.
- Ny haben'ny casting: arakaraka ny haben'ny haben'ny andiany no lehibe kokoa ny tombony ara-toekarena.
- Fitaovana fanariana: ny filaharana azo ampiharina tsara sy ny tsy fahampian'ny fampiharana dia eo ho eo: firaka vy tsy misy ferrous-vy tsotra vy-ductile vy-ambany carbon steel sy firaka vy; mandalo ny fiomanana ilaina mba tsy hiteraka fanandramana fanodinana, lava loatra ny cycle debugging.
- Ny halehiben'ny fanariana: Diniho indrindra ny fampiasana ny fitaovana mifanaraka amin'izany (toy ny latabatra mihetsiketsika, boaty fasika).
- Rafitra fanariana: Arakaraka ny maha-sarotra ny firafitry ny fanariana dia vao mainka azo itarafana ny fahamboniana sy tombony ara-toekarena amin'ny fizotran'ny fanary foam. Ho an'ny rafitra misy fantsom-baravarana tery tery sy mpifanelanelana, ilaina ny manao andrana mialoha alohan'ny hampiasana ny dingan-javatra very. voka-pambolena sy fiompiana.
Niorina tamin'ny 1995, China Minghe Casting dia singa famolavolana fenitra indostrialy ho an'ny lamina mamorona lasitra ho an'ny fanariana foam. Minghe dia ao amin'ny renivohitra indostrialy-Dongguan, Sina. Orinasa teknolojia avo lenta any amin'ny Faritanin'i Guangdong izy io. Manana atrikasa famokarana misy velarana fananganana 18,000 metatra toradroa izy. Izy io dia fitaovana miaraka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famolavolana, fanariana, fametahana milina, fivoriambe, ary fitsaboana amin'ny tany. Io no ivon-toerana Dongguan R&D sy Ivon-teknolojia. Minghe Casting izao dia manana patanty famoronana 6 sy patanty modely ilaina amin'ny 20. Orinasam-barotra iray ao amin'ny Faritanin'i Guangdong izy io. Manana mpiasa maherin'ny 230 ny orinasa, ao anatin'izany ny injenieran'ny famolavolana bobongolo 36 sy ny teknisiana 39; manana 40 fitaovana fanodinana CNC sy fitaovana fanodinana ankapobeny izy io. Singa 28, milina fandrefesana 3 mandrindra, ary scanner miverina 1. Amin'ny alàlan'ny famolavolana solosaina telo-refy, fandaharana, teknolojia fanodinana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina, fampiasana fomba FM hanariana banga bobongolo aluminium, ampiarahina amin'i Minghe Casting dia namorona teknolojia firakotra TEFLON (TEFLON) sy ny orinasa Minghe Powder Coating Factory, ka ny kalitaon'ny bobongolo, ny marina, fahombiazana, Ny fiainana serivisy dia afaka mamaly ny takian'ny mpanjifa. Ny mpiasa ara-teknikan'ny orinasa dia mitarika ny fivorian'ny bobongolo, ny fampiasana, ny famokarana andrana, ny fikojakojana maimaimpoana ary afaka manome andiam-teknolojika fanariana foam vita araka ny filan'ny mpanjifa.
Ny fizotrantsika manokana amin'ny famolavolana sombin-javatra very
Minghe Casting, ho toy ny famolavolana lasitra mamorona bobongolo ho an'ny fanariana foam very, mamokatra bobongolo izay be mpampiasa. Taorian'ny fampandrosoana sy fanavaozana an-taonany maro, Minghe Casting dia lasa mpamatsy bobongolo ho an'ny orinasa casting casting foam maro. Ny fizotran'ny Customization of Lost Foam Casting dia azo fintina toy izao:
- Fakan-kevitra momba ny mpanjifa: mifandraisa aminay azafady mba hihena.
- Drafitra famokarana: hanamboatra vahaolana bobongolo ho anao izahay.
- Famerenana ny drafitra: Hodinihin'ireo injeniera manam-pahaizana manokana ny drafitra.
- Manaova sonia ny fifanarahana: manasonia fifanarahana fiaraha-miasa ary manomboka manomana vokatra ho anao.
- Volavola bobongolo: famolavolana 3D sy fizahana sary momba ny faritra.
- Masinina cnc: milina CNC ny banga bobongolo aluminium.
- Fivoriana sy fanandramana: ny fivorian'ny bobongolo, ny fanandramana ary ny asa fanandramana dia mifanaraka amin'ny fenitra takiana.
- Mandalo ny fitsapana: Fitsapana mba hahazoana antoka fa tsy misy olana ny vokatra.
- Fitsaboana amin'ny rindrina: Avy eo tanteraho ny fitsaboana amin'ny fonon'ny lasitra.
- Fanaraha-maso ny ozinina: fanaraha-maso ny ozinina, ary koa fonosana entana ary fanaterana entana ho anao.
- Fametrahana sy fanesorana: fametahana bobongolo sy fanafoanana ary asa famindrana serivisy aorian'ny fivarotana.
- Fanaterana bobongolo: Farany, omeo vokatra mahafa-po anao.
Karazan-tsarimihetsika famokarana samihafa amin'ny famoahana sombin-javatra very
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam1 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam2 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam3 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam4▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam5▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam6▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam7 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam8▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam9 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam10▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam11 ▶
Ny toe-java-misy amin'ny famokarana casting very foam12▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanariana sombin-javatra very
Safidio ny mpamatsy casting farany very foam
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana sombin-tsika very dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana fanariana sombin-tsakafo very dia manome casting maharitra sy mora izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana foam very.